Imixholo yeAdsense ephezulu: I-Ajax, iFlash, iWordPress kunye neFirefox | Martech Zone
NgoLwesithathu, uDisemba 27, 2006 NgeCawa, Oktobha 4, 2015 Douglas Karr
Kwiiveki ezimbalwa ezidlulileyo, ndadibanisa I-Adsense eneGoogle Analytics (Ingcebiso # 4). Sele ndinomdla wokujonga iziphumo. Uhlalutyo lukaGoogle luneNdlela yeNjongo yokuGuqula apho unokubona umendo osetyenziswe ziindwendwe ngaphambi kokucofa intengiso. Uxhotyiswe ngolu lwazi, umntu unokuthatha iimbono ezimbini ezahlukeneyo:
Ndingenza imali ngakumbi ukuba ndiyaqhubeka nokubhala ngezi zihloko.
Kukho imfuno yomxholo kwezi ndawo-kakhulu kangangokuba abantu bazimisele ukucofa kwiintengiso ukuze bafumane!
Ngeeveki nje ezimbalwa zohlalutyo phantsi kwebhanti lam, andizukutshintsha imikhombandlela kumxholo webhlog yam ukuze ndifumane imali eyongezelelweyo yentengiso. Kodwa… kubonakala ngathi abantu bayayifumana ibhlog yam kwaye bayishiya ngeekhonkco zentengiso xa bengalufumani ulwazi abaludingayo kwizihloko abazifunayo. Nanku ukujonga okupholileyo kwizibalo ngeNdlela yeNjongo yokuGuqula:
Ezo zihloko? I-Ajax, iFlash, iWordPress kunye neFirefox. I-WordPress yenye yezihloko 'ezishushu' kwibhlog yam enezinto ezininzi ezikwizihloko ezimakishwe ngeWordPress kunayo nayiphi na enye indawo. Ndisebenza kwi-WordPress Sidebar Widget okwangoku kuba ezo zinqweneleka kwaye zinokuveza ibhlog yam kubafundi abongezelelweyo.
Ngokubhekiselele kwi-Ajax, iFlash, kunye neFirefox… kuya kufuneka ndibone apho ndifuna ukuzisa khona. Ndingumlandeli omkhulu we-Ajax kodwa andinawo amava amaninzi eFlash (umhlobo wam uBill unokuninzi ngakumbi). Kwaye ndiyayithanda iFirefox, yongeza itekhnoloji, kwaye Umlilo! I-Firebug yiyo le isixhobo esibalulekileyo sophuhliso kuye nawuphi na umphuhlisi weWebhu.
Ke… bhala malunga nezihloko ukuhlangabezana neemfuno kwaye ungenza imali ngakumbi ngokwenza oko! Uhlalutyo lupholile!
Ukukhangela iZithuba zeBhlog ngeTechnorati
Novemba 13, 2008 ngo-6: 48 PM
Ndikhangela iscript esibonisa iGoogle adsense kwiflash.
Novemba 17, 2008 ngo-2: 23 PM